Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sweden oo u istaagay garab istaaga dadka ay Fatahaadaha Saameeyeen. – Radio Muqdisho
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sweden oo u istaagay garab istaaga dadka ay Fatahaadaha Saameeyeen.
Jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada qaaradda yurub ayaa kaalin muhiim ah waxa ay ka qaadanayaan gurmadka loo sameynayo samata bixinta iyo caawinta qoysaska faraha badan leh ee Soomaaliyeed ee Saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobabkii xilliga deyrta ee dalka ku dhuftay.
Maxamed Faarax Canshuur oo loo yaqaanno wariye guhaad ahna wariye madax bannaan oo ku sugan waddanka Sweden Gaar ahaan magaalada Karlstad ee Gobolka Värmland, oo la Hadley Radiomuqdisho ayaa Sheegey in jaaliyada Soomaaliyeed ee Sweden ay dadaal dheeri ah bixiyeen sidii ay gurmadka qeybtooda uga qaadan lahaayeen.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden waxa ay aruurinayaam dhaqaale ay doonayaan inay ka saacidaan dadka ay saameeyeen Fatahaadaha webiga iyo daadadka roobabka.
Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibada ayaa dhamaantood u istaagay garab istaaga shacabka Soomaaliyeed ee ay dhibaateeyeen Fatahaadaha iyo daadka.
Wasiiru-Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada oo Muqdisho ka Furay Shirweynahii Shanaad ee Machadka Cilmi baarista Soomaaliyeed.